Dr Djohary ANDRIANAMBININA: Mpianatry ny CNTEMAD ny 70% afaka amin’ny fifaninana hiditra mpiasam-panjakana. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE Dr Djohary ANDRIANAMBININA: Mpianatry ny CNTEMAD ny 70% afaka amin’ny fifaninana hiditra mpiasam-panjakana.
Dr Djohary ANDRIANAMBININA: Mpianatry ny CNTEMAD ny 70% afaka amin’ny fifaninana hiditra mpiasam-panjakana.
By Nirinajan 27, 2016, 01:56 42
Valo volana izao no niova ny Mpitantana fianarana ampitain-davitra CNTEMAD. Ankoatra ny lalam-piofanana efa mahazatra izay nahafantarana azy toy ny “Droit, Gestion, Informatique, Communication” dia misy lalam-piofanana na “mention” efatra vaovao ao aminy. Anisan’izany ny “Science économique”, “Génie civile”, “Télécommunication” ary ny “Art graphique”. “Miavaka kely ity farany satria manatrika fampianarana mihitsy ny mpianatra fa tsy amin’ny alalan’ny fampianarana ampitain-davitra”, hoy Dr Djohary ANDRIANAMBININA, Tale Nasionalin’ ny CNTEMAD.
Mba hisian’ny mangarahara, nohatsaraina ihany koa ny fitantanan-draharaha sy ny vola satria mampiasa ny fitaovana informatika antsoina hoe: ENT na “Environnement Numérique de Travail” ity fampianarana ambony ity ka ampidirina ao daholo ny mombamomba ny fitantanana rehetra.
Ahitana rantsa-mangaikan’ny CNTEMAD avokoa manerana ny faritra 22. Miisa 33 izy ireo. “Ho fanampiana indrindra ireo mpianatra nahazo ny mari-pahaizana bakalorea na mpiasa te hampitombo ny fahaizany no antony izany”, hoy izy. Noho izany, tsy voatery miakatra eto Antananarivo na mandeha lavitra ireo mpianatra.
Nisokatra ny 19 oktobra 2015 teo ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2016 ary tsy hifarana izany raha tsy amin’ny tapaky ny volana aprily 2016. Nohamafisin’ny Tale Nasionaly fa tsy misy ny fanandinana fitsapam-pahaizana idirana ao. Ny 06 febroary ho avy izao ny fampahafantarana ny mpianatra ny manodidina ny fampianarana.
Marihina fa amin’ny tapaky ny volana febroary no hanomboka ny fampivondronana na “séance de regroupement” voalohany.
Interview: Dr Djohary ANDRIANAMBININA
Previous PostAGROBUSINESS: Tantsaha mampiasa ny tany najariany, ho foana ny adi-tany. Next PostFIKAMBANANA HEBRAIKA JODAISMA: misy adim-pinoana ny mahazo an’i Kohen RIVOLALA…
42 thoughts on “Dr Djohary ANDRIANAMBININA: Mpianatry ny CNTEMAD ny 70% afaka amin’ny fifaninana hiditra mpiasam-panjakana.”